Takalonaina Roapolo Maty Sy Telo Ambin’ny Folo Hafa Avotra Nandritra Ny Fahirano Fakàna Takalon’aina Tao Dhaka Izay Niafara Tamin’ny Loza Mahatsiravina · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraPalash Ranjan Sanyal
Voadika ny 17 Jolay 2016 14:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Italiano, English
Ny sabotsy 2 Jolay 2016 teo, nanafika trano fanaova-mofo Holey Artisan tao amin'ny faritra diplomatika Gulshan tao Dhaka, mba hamarana ny krizin'ireo mpaka takalonaina ny hery mitambatra iray niarahan'ny tafika avy ao Bangladesh, ny vondron-tafiky ny mpiandry sisintany ao Bangladesh, ny mpitandro ny filaminana ary ny andiany mpanao fanafihana mailaka.
Ny zoma alina lasa teo, fito na valo teo ho eo no isan'ireo mpanafika ary naka ny fifehezana ny tao amin'ny The Cafe tao an-drenivohitr'i Bangladesh, toerana iray falehan'ireo vahiny mpila ravinahitra, ireo diplomaty ary ireo Bangladeshi mpanankarena. Somary mirona amina tsiro eoropeana ny sakafo ao amin'ilay trano fanaova-mofo/fisotroana kafe ary nahatonga ny anaran'ilay toeram-pisakafoanana natao hoe O'Kitchen. Mahatskaiky fa anisan'ny naorina teo amin'ny iray amin'ireo faritra tena tsara aro ao Gulshan ilay toeram-pisakafoanana; fantatra amin'ny maha faritra diplomatika azy izy io, satria ao ireo masoivohom-pirenena sy ireo fikambanana iraisam-pirenena no miorina.
Ny Sampana misahana ny Fifandraisan'ireo Fitantanan-draharaham-Panjakana (ISPR), mpitondra tenin'ny tafika, dia nanamafy fa nahita ny fatin'ireo takalonaina miisa 20 – vahiny ny ankabeazany, nefa koa maro no olona avy ao Bangladesh – maro tamin'izy ireo no novonoina tamin'ny fampiasàna zava-maranitra. Takalonaina telo ambiny folo, nahitàna teratany japoney iray sy teratany Sri Lanke roa no avotra ary maty ireo enina mpaka takalonaina. Nandritra ilay fifanandrinana ny zoma alina, polisy roa no maty ary maherin'ny roapolo no naratra mafy nandritra ny fifampitifirana nifanaovana tamin'ireo mpaka takalonaina, izay nanipy grenady tany amin'izy ireo.
Manamafy ny tafika fa 20 no maty tao #DhakaAttack tamin'ny famintinam-baovao. #Dhaka #Bangladesh
Ny ISIS, rantsana iray teraka avy amin'ny Al Qaeda izay tonga hifehy ampahany midadasika ao Irak sy Siria tamin'ny fampiasàna tetikady fampijaliana sy feno herisetra mibaribary, no nitonona ho tompon'andraikitra tamin'ireo fanafihana; ireo sampan'ny media-n'izy ireo, ny Masoivohom-baovao Amaq, no nizara ireo sary sasantsasany mampihoron-koditra avy eny amin'ny terana nitrangan'izany, tamin'ny alàlan'ireo kaontiny Twitter, anisan'izany ny faty mihoson-drà an'ireo takalonaina sasantsasany. Tsy afaka nirosoana ny fanamarinana ny fahazoana antoka an'ireo sary – na ilay filazàna – .
Ny zoma alina, nohamarinin’ireo vavolombelona ny fisian'ireo valo mpanafika – nirongo fiadiana AK22, sabatra ary baomba, ary nihiaka ny Allahu Akbar (izay midika hoe Lehibe Andriamanitra amin'ny Arabo) – niditra tampoka tao amin'ilay toeram-pisakafoanana naka takalonaina maherin'ny 20, anisan'izany ireo vahiny. Afaka nitsoaka haingana ny zava-misy ireo mpitsidika sasantsasany ary nizara izay zavatra hitany nony avy eo. Roa no ireo manamboninahitry ny polisy no maty – ireo namaly voalohany – tratry ny tsy nampoiziny. Arakaraky ny nirosoan'ny alina, farafaha-keliny olona 40 no naratra, anisan'izany ireo mpitandro filaminana.
Soumir Baroi, izay mbola mila fantarina ny momba azy, dia voahidy tao amin'ny iray amin'ireo trano fandroana, saingy nahavita nanao izay hifandraisana tamin'ny rahalahiny tamin'ny alalan'ireo hafatra ifandefasana. Tovovavy iray hafa koa, afaka nifandray tamin'ny rainy nandritra ilay fahirano.
Tsy ela akory dia nisy ny fisakanana ny media ary nohodidinina ny faritra tao anatin'ny efatra kilometatra manodidina ilay toeram-pisakafoanana mba hahafahan'ireo tompon'andraikitra nanao ny fanoherana an'ireo mpanafika. Na izany aza, voatsikera ny media sasantsasany noho ny tatitr'izy ireo tsy maneho ny maha-tomponandraikitra:
Antenaiko ireo media tsy hanao io sakana io ireo media amin'n fitaterana mikasika ny takalonaina na ny fianakavian'izy ireo #Dhaka #Gulshan
Ny sabotsy maraina, fiarabe mifono vy roa no nampiasain‘ireo tomponandraikitra mba hamakiana ireo rindrin'ila fisotroana kafe hidirana ao anatin'ireo faritra. Taorian'ny tifitra indray mandeha sy ireo fipoahana, mpanafika enina no maty ary 13 ireo takalonaina avotra. Azo velona ny mpanafika iray. Sahbakaka ambody riana ireo iraka vahny ao Dhaka ary nangataka ireo olom-pireneny mba tsy hivoaka ny trano ireo masoivoho.
Na dia alimbe aza no nitranga ilay fakana takalonaina ny Zoma alina teo, norasain'ireo mpanafika tsy fantatra tamin'ny zava-marainitra ny mpisorona Hindu iray tao amin'ny tempoly iray. Navelan'izy naratra be teo izy, noeritreretiny fa maty, nefa nentin'ireo tompontany haingana tany amin'ny toeram-pitsaboana izay mbola ahiana mafy ny momba azy. Iny maraina be iny indrindra koa, mpisorona iray hafa koa no novonoin’olona telolahy nandeha kodiarandroa, manampy isa ireo herisetra ampolony maro tao Bangladesh.
Misy fiantraikany maharitra amin'ny fandrosoan'i Bangladesh ireo fanafihana ireo. Nanoratra tao anaty tatitra iray i Ishtiaq Rouf, bilaogera iray mpila ravinahitra sady injenieran'ny fiarovana amin'ny solosaina fa: